Haddii aad ku jirtid horumarinta shabakadda ama naqshadeynta websaydhka, waad ogtahay in mid ka mid ah howlaha ugu jahwareerka badan marka aad dhammaystirto nashqad qurux badan ay dhab ahaantii hubineyso inay ka shaqeyneyso dhammaan daalacayaasha. Kaliya maahan biraawsarka iyo nidaamka hawlgalka inay si ba'an u saameyn karaan sida bogga wax u dhiibo, sidaas oo kale khadadka aad ku shaqeyneyso saameyn kuma yeelan karaan!
Goobta xitaa waxaa ku jira muraayadaha kiniinka iyo moobiilka! Marka aad tijaabiso tijaabooyinka aad rabto, Tijaabinta Browser wuxuu ku siinayaa URL aad si toos ah ula wadaagi karto macmiilkaaga! Tani waxay xaqiijineysaa in macmiilku si buuxda u fahmayo in goobta loogu talagalay iyo in kale dhammaan daalacashada caanka ah ama, haddii ay tahay arrin ku saabsan sheybaar, waxay kaa caawinaysaa inaad u caddeyso inaysan ahayn wax qabashadaadu.
Qiimaha wuxuu ku saleysan yahay tirada daqiiqo loo baahan yahay in la qaado tallaalada tijaabada ah. Xirmada furitaanka waa $ 19.95 bishiiba - kaliya iska hubi inaad xadidayso liiskaaga imtixaanka si aadan daqiiqado aad dhaqso ugu dhammaan. Bishii ugu horeysay ee aan adeegsaday, waxaan aaminsanahay inaan isticmaalay imtixaanada caadiga ah oo waxaan ku gubay dhammaan daqiiqadahayga laba tijaabo oo ku taxan tiro aad u tiro badan qalabka, nidaamyada hawlgalka, daalacashada iyo qaraarada!
In ka yar $ 20 bishii, tani waa xalka cajiibka ah ee u oggolaan doona naqshadeeyayaashaada tijaabi qalab kasta. Haddii aad shirkad tahay, waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad raacdo oo aad hubiso in naqshadahaagu ay kaa taageerayaan guud ahaan dhammaan daalacashada iyo aaladaha waaweyn ka hor intaadan dirin lacagta ugu dambeysa!